Adobe inoti Photoshop iri 50% nekukurumidza paApple Silicon | Ndinobva mac
Adobe inoti Photoshop inoshanda 50% nekukurumidza paApple Silicon
Toni Cortes | | Zvimwe Zvirongwa zveMac, dzakawanda
Parizvino, isu hatisisina kushamiswa neanoshamisa mashandiro anopiwa neiyo nyowani M1 processor yakaiswa paMacs nyowani eiyo nyowani Apple Silicon nguva. Iri basa rinonakidza rakagadzirwa neApple uye rakaiswa mukuitwa nevanhu ve TSMC.
Uye zviripachena, iko kunorema kunyorera uye kunoda yakakwira yekugadzirisa mitoro, unonyanya kuoneka musiyano, pakati peMacs apfuura akavakirwa neIntel processor, uye iwo matsva ane machipisi ane ARM ekuvakisa. Adobe inova nechokwadi chekuti yako nyowani Photoshop Native weApple Silicon inomhanya makumi mashanu muzana nekukurumidza kupfuura iyo vhezheni yeMacs ine Intel processor. Uye ndinozvitenda.
Dai iwe uine Mac neIntel processor uye iwe waichinjisa kune imwe yemhando nyowani Apple silicon, Unogona kunge usina kuona musiyano mukuru, kana usati waisa tsvimbo yakawanda kune processor. Kana iwe uchinge uchingoishandisa kushandisa iyo internet uye yakajairwa hofisi otomatiki mabasa, zvinonyanya kuitika kuti hauna kuona kuwanda kukuru mukuita kwayo.
Asi kana iwe wakamboishandisa pamabasa anoda kuwanda kwakawanda kwemaitiro, sekunyora zvirongwa, kupa kwe3D, kana kugadzirisa vhidhiyo, unenge watoona kare kuti iyo nyowani inobhururuka sei. M1 processor uchienzaniswa neIntel yapfuura.
Sezvatove tinozivisa mazuva mashoma apfuura, Adobe achangobva kuburitsa vhezheni itsva ye Photoshop iyo inoshanda natively pane nyowani Apple Silicon Macs iyo inosanganisa iyo M1 processor ine ARM yekuvakisa.
Photoshop ikozvino 50% nekukurumidza nekuda kweM1
Iyo yakanyanya kuchenesa iyo chifananidzo, ndipo paunonyanya kuoneka musiyano uripo pakati pe processors.
Uyezve, mune indavhiyu ne Computerworld, Photoshop's Chigadzirwa Manager, Maka DahmZvakatora nguva kuona Photoshop ichimhanya makumi mashanu muzana nekukurumidza paMacBook M50 zvichienzaniswa neIntel-based MacBook yegore rapfuura.
Dahm anotsanangura kuti ivo vakafananidza imwe yeMacBook M1s nyowani kune imwechete yakagadzirirwa chizvarwa chekare MacBook, uye vakaona kuti mune yechinyakare maitiro, Photoshop yakamhanya 50% nekukurumidza kupfuura yekare hardware. Inotaura zvakare kuti hukuru hwekuvandudza mashandiro ingori mavambo, uye kuti vacharamba vachishanda pamwe neApple kuti vawedzere kugadzirisa mashandiro nekufamba kwenguva.
Anowedzera kuti nekuda kwesimba reiyo nyowani M1 chip, zvakakurudzira timu kuti ienderere mberi ichisundira maficha ave chinhu chikuru che Photoshop. Zvimiro senge Zvemukati Ziva Zadza, Auto Sarudza Chinyorwa, Matenga ekutsiva matenga, uye mamwe akawanda akawedzeredzwa nekuda kweiyo nyowani Apple processor.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Adobe inoti Photoshop inoshanda 50% nekukurumidza paApple Silicon
Metrolinx inotanga kuyedza muToronto neApple Pay pamitsetse yayo yezvitima
Apple ichawana kukosha kwemabhirioni matatu nekuda kwemotokari yayo yemagetsi